'फेसबुक पोष्टको वैधानिकता छुट्याउने काम हाम्रो होइन' : जुकरबर्ग !
‘फेसबुक पोष्टको वैधानिकता छुट्याउने काम हाम्रो होइन’ : जुकरबर्ग !
फेसबुकका मालिक मार्क जुकरबर्गले आफ्नो स्वामित्वको सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट हुने कुनै पनि सामग्री कानूनले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनुसारको अभिव्यक्ति हो वा होइन भनी छुट्याउनु आफ्नो कम्पनीको जिम्मेवारी नभएको बताएका छन् ।
सम्बन्धित देशको सरकारले नै आफ्ना नागरिकहरूले फेसबुकमा पोस्ट गर्न पाउने र नपाउने कुराको नियमन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
हालै जर्मनीमा आयोजित म्युनिक सुरक्षा सम्मेलनमा बोल्दै जुकरबर्गले चरम नियन्त्रणले भने व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउन सक्ने जोखिम पनि व्यक्त गरे ।
‘कुनै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबिना, सामाजिक मर्यादालाई कसरी सन्तुलित राख्ने भन्ने कुरा हामीजस्तो निजी कम्पनीले निर्णय गरोस् भन्ने हामी चाहँदैनौं,’ उनले भने ।
यद्यपि सरकारहरूको उपयुक्त नीतिको अभाव हुन्जेल आफ्नो क्षमता अनुसार आफूहरूले सामग्रीको नियमन गर्ने जुकरबर्गको भनाइ छ ।